IiAnora zeAngora - Isinxibo Sabafazi Casual Casual
San Francisco Utsalo
Nangona umhla we i-angora Ijezi kudala zadlula, abasetyhini abathanda iimpahla ezithambileyo nezitofotofo banokufumana izinto ezintsha kwezi zinto ziphambili, kunye nezitayile zepiniki zokuvuna ezithi zivuse ixesha langaphambili. Fumana ijezi ekufaneleyo kwaye uyikhathalele ngokufanelekileyo ukuze ufumane okona kulungileyo kwimpahla yokunxiba.
Ukufumana phi iAngora Sweaters
Ii-sweatshi ezintsha ze-angora kuye kwanzima kakhulu ukuzifumana, njengoko abathengisi baphendule kwividiyo ze-PETA zendlela onzakala ngayo onogwaja kwimveliso ye-angora ngokumisa ukuveliswa kwayo yonke imveliso ye-angora. Ngoku kuqheleke ngakumbi ukufumana ii-angora blends okanye i-mohair sweaters, ezilinganisa ukubonakala kwe-angora.
Iklabhu yaseMonaco : Banikezela ngesiseko somsebenzi onqabileyo kumfazi ofuna ukujonga ubuchwephesha ngaphandle kokubingelela isitayile okanye intuthuzelo. Ngokwesiqhelo banikezela ngee-sweatshi ze-angora kwiinyanga ezibandayo, kwaye banikezela ii-vergine knits-umxube wekotoni, i-alpaca, i-cashmere, kunye ne-angora ethambe ngokumangalisayo.
USam Edelman I-brand kutshanje iphehlelele ingqokelela yengubo yokongeza kuluhlu lwezihlangu ezithandwayo, kwaye banikezela ii-angora sweatshi ngeendlela ezahlukeneyo ze-chic ezihamba nayo yonke into. Babo Imikhono emide yeAngora ijezi ($ 84, ubungakanani XS-L) yinto elula, esisiseko yemihla ngemihla.
IiSweaters zikaScott : Banikezela ngeendlela ezininzi ze-angora sweatshi, ezinye zazo zingumxube we-angora. Inketho encomekayo yiNkosazana yabo uKate Angora Shrug (i-325 yeedola, ubukhulu be-XS-L), efanayo naleyo yayinxitywe ziiDuchess zaseCambridge ngomhla wakhe womtshato. Ukhetho oluhle lomtshato wasebusika!
I-Princess Kate Shrug
Etsy Le ndawo yindawo yokugcina ubuncwane bezinto zokubhukuda zeediliya ezivela kuwo onke amaxesha ahlukeneyo kunye nezitayile. Kuba into oyifumanayo apha zii sweatshi zeediliya, ukhetho luyahluka kakhulu kwaye luyatshintsha rhoqo. Amaxabiso ayahluka ngokuxhomekeka kubukho.
eBay : YAwunakuze uhambe gwenxa ngokujonga eBay Izinto zeediliya, kubandakanya iirawuzi zeAngora. Ngalo naluphi na usuku olunikiweyo, unokufumana iimfumba zee-angora sweaters ezithengiswayo kwiindidi zamaxabiso kunye nezitayile.
Imifanekiso yeZitayile eziHlangayo zazo zonke iiMilo zoMzimba
Iingubo zeMaxi yabasetyhini
Isinxibo esifanelekileyo seSmart seTyhini
Ukunyamekela ijezi yakho
Into yokuqala abantu abayiqaphelayo malunga nee-sweaters ze-angora yinto yoxinzelelo. I-Angora yinto ethambileyo emangalisayo, enomtsalane kwimpahla enxitywe ecaleni kolusu. Ifayibha ye-Angora ivela kwimivundla kwaye njengoko nabani na esazi, imivundla ithambile, ke iijezi zendalo ezenziwe ngoboya bazo zinjalo nje. Nangona kunjalo, oku kuza kunye nokuphazamiseka - ukuphalaza. Nabani na okhe waba nejezi ye-angora uye wazibuza ukuba ingaba bangawugcina njani umphezulu wabo ekushiyeni uboya naphi na apho baya khona.
Ngelixa ungeke ukwazi ukuyeka ngokupheleleyo ijezi ye-angora ekuphalazeni, ungayinyanga ngaphambi kokuba unxibe okokuqala ukunciphisa le ngxaki ikhathazayo.
Okokuqala, songa ngononophelo ijezi yakho kwaye uyibeke kwingxowa enkulu yeZiploc.
Beka ijezi ebhegiweyo kwifriji yakho.
Mayihlale kwisikhenkcezisi kangangeeyure ezintathu ukuya kwezine.
Yisuse kwaye unxibe (emva kokuyifudumeza kancinci).
Abanye abantu banokuzibuza ukuba kutheni umntu eza kungena engxakini xa zininzi ezinye iimpahla ezinokuthi zinxitywe ngqo kwihanger. Nje ukuba unxibe i-angora, uyakuqonda ngcono. Ayisiyonto intle kwaphela, ikwashushu kunoboya, nto leyo edibanisa kakhulu ngeenyanga ezibandayo zonyaka.
Ukucoca i-angora top yakho, hlamba izandla ngamanzi ashushu kunye nesepha emsulwa kwaye uyivumele ukuba yome umoya. Ukuba uyiphosa kwi-washer, unokuyanga le ngubo intle.
Ukuthandwa kweeAngora Sweaters
Ukuba ujonga imifanekiso yabasetyhini abancinci kwiminyaka ye-1940 kunye neye-1950s, uyakubona ukuba uninzi lwabo lwalunxibe ii-angora sweatshi kwimfashini yamantombazana. Ijezi zazithandwa kakhulu ngeli xesha kwaye zazinxitywe ngeziketi zepensile kunye neebhulukhwe zeCapri. Uninzi lweejuzi lwalunemikhono emifutshane kwaye lwalubonisa imijikelezo okanye intamo yesikhephe, kwaye zazibonakala zintle ngeseti yeeperile zakudala.
iiatlasi ezomeleleyo zamagxa emason yejagi ixabiso
Ukuthandwa kwee-angora sweaters kwathatha ukwehla kwangaxeshanye iiseti zamawele zaba yinto engathandekiyo. Xa i-polyester njengelaphu libetha indawo yesitayile, uninzi lwabasetyhini abancinci babuyela kwimpahla yokunyamekela ngokulula kunye ne-angora bathatha isihlalo sangasemva ukuhlamba nokunxiba iimpahla.
Njengengubo encinci emnyama edumileyo kaChanel, kukho izinto zokunxiba ezisoloko zisesitayeleni ukusuka kwixesha lonyaka ukuya kwelinye kwaye zibonakala ngathi zidala iminyaka ngaphandle komthungo. Ii-sweatshi ze-Angora yenye yezo ziqwenga zodidi ekufanele ukuba wonke umntu wasetyhini abe nazo njengesiqhelo se-wardrobe. Nokuba ufumana ijezi ye-angora yeediliya okanye uthenga entsha kraca, uyonwabele imvakalelo yokuthamba kunye nobushushu ngalo lonke ixesha uyityibilika, kwaye uya kujongeka kwaye uzive ngathi sisigidi seedola.
Isitshayina Astrology Iholide Party Themes Baby Clothes Iiproteni Source For Vegetarians Iifoto Iincwadi
ishawa yabantwana enkosi ngamagama okubhala
izimvo zokwamkela umtshato kuhlahlo-lwabiwo mali
andizange ndakhe ndalulutsha
ungajongana njani nokuba wedwa ungenabahlobo
ungayondla njani intlanzi ngaphandle kokutya kwentlanzi
Nxiba unxibe iileggings neebhutsi